Muxuu ka yiri Ole Gunnar Solskjær qorshaha kooxda Manchester United ee suuqa kala iibsiga?? – Gool FM
(Manchester) 23 Sebt 2020.Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sare u qaaday shakiga ku saabsan in Red Devils ay heshiisyo cusub ay ka sameyn doonto inta ka harsan suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Manchester United ayaa kaliya la soo saxiixatay xagaagan ilaa iyo haatan xiddiga khadka dhexe reer Hollad ee Donny van de Beek, kaasoo kaga soo dhaqaaqay kooxda Ajax.
Manchester United ayaa lala xiriirinayay tan iyo bilowgii suuqan xagaaga saxiixa laacibka reer England ee Jadon Sancho, iyadoo ay wargeysyada Ingiriiska ay dhowr jeer xaqiijiyeen in United-ka ay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto laacibka reer England.
Sebastian Kehl oo agaasiaha ciyaaraha kooxda Borussia Dortmund ayaa xaqiijiyay Jadon Sancho uu sii joogi doono Borussia xagaagan.
Sida laga soo xigtay shabakada “Sky Sports” Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay kaddib markii la weydiiyay suurtogalnimada ay Manchester United ku sameyn karto heshiis cusub inta ka dhiman suuqan xagaaga, wuxuuna yiri:
“Waxaan la shaqeyneynaa kuwa aan hadda heysano, waan arki doonaa waxa dhaca”.
“Xaqiiqdii waan la hadleynaa dhamaan saxaafada haddii wax cusub ay dhacaan inta lagu gudajiro suuqan kala iibsiga”.
Waxaa xusid mudan in Manchester United ay kala kulantay kooxda Crystal Palace guuldarro 1-3 ah sabtidii lasoo dhaafay, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka Premier League.